Uzijonga njani iiNtlawulo zeNkxaso yoMntwana kwi-Intanethi - Inkxaso Yomntwana
Iliso Makeup Techniques
Uncwadi Ne Poetry
Uzijonga njani iiNtlawulo zeNkxaso yoMntwana kwi-Intanethi
Ngelixa ukuthumela nokufumana intlawulo yenkxaso yomntwana yayiqhele ukuba luxanduva lwabazali abathatha inxaxheba, uninzi lwamazwe ngoku sele efudukele kwinkqubo apho endaweni yokwenza intlawulo ngqo kumhlawuli, umhlawuli uhlawula urhulumente, emva koko urhulumente ahlawule lowo ubhatalayo. yenza kube lula ukulawula intlawulo yomntwana wakho kwaye ishenxise unxibelelwano phakathi kwabo babesakuba ngamaqabane ngeenjongo zemali.
Ukuba ilizwe lakho libonelela ngee-eServices zenkxaso yomntwana, unokulandela umkhondo wentlawulo yakho ngokungena kwiwebhusayithi karhulumente ekhuselekileyo. Nangona iinkonzo zihluka ngurhulumente, kukho izinto ezahlukeneyo onokuzenza ukwenza inkqubo yokuhlawula okanye yokufumana inkxaso yomntwana ibe lula njenge:
Ndingayisebenzisa kangaphi inguquko kwikati yam
Uninzi lweesayithi zikuvumela kuphela ukuba ubone iintlawulo zamva nje zakutshanje kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
Abazali abangabambisiyo babenakho ukuhlawula kwi-intanethi ngekhadi lekhredithi okanye ledebhithi.
Ukuhlawula abazali banokugcina inombolo yekhadi letyala, kwaye baya kuba nakho ukuqinisekisa nje inyanga nenyanga ukuba kurhoxisiwe.
Abazali abangabambeleli kubo banokuqinisekisa ukuba abahlawuli ngaphezulu ngokulandela umkhondo wentlawulo kwi-intanethi.
Abazali abafumana inkxaso yabantwana banokubona xa iintlawulo zenziwe kwiiakhawunti zabo.
Abazali abagcina abantwana banokukwazi ukuseta izaziso ze-imeyile ezibaxelela xa kufunyenwe intlawulo.
Umthetho Wezomkhosi kwi-Alimony kunye neNkxaso yaBantwana
Ukulinda Indoda Eqhawula Umtshato
I-Alimony ijonga ukuba ayiCashed
Ngamafutshane, isistim ye-intanethi yenza kube lula kakhulu ukugcina irekhodi lentlawulo, evumela abazali bobabini ukuba bangqine ukuba bayifumene intlawulo (okanye ukusilela kwayo) ukuba kuye kwakho ingxaki. Ayingawo onke amazwe aneempawu ezifanayo zeakhawunti yabo yokuxhasa abantwana kwi-intanethi, kodwa uninzi lunazo iinkonzo ezifanayo. Umzekelo, iinkonzo zenkxaso yabantwana kwiCalifornia zikuvumela ukuba ujonge intlawulo, utshintshe idilesi yakho, ucele imbali yokuhlawula okanye ukuqinisekiswa kwengeniso, kwaye wenze intlawulo. Uninzi lweendawo zikwanazo nezixhobo ezibalulekileyo ezinjengeendawo ze-arhente, izixhobo zokubala abantwana, imithetho yokuxhasa abantwana kunye neefom.
Into oyifunayo ukuze uvule iAkhawunti
Ukuqala ukujonga iintlawulo zenkxaso yomntwana kwi-intanethi, kuya kufuneka usete iakhawunti. Kwiindawo ezininzi zewebhusayithi, uyakufuna inombolo yetyala lenkxaso yomntwana kunye / okanye nenombolo yokhuseleko kwezentlalo. Indawo inokuthi ikubuze nenombolo yomyalelo wenkundla, igama lakho, idilesi kunye nolunye ulwazi oluchongiweyo.
Amazwe aneNkxaso yaBantwana eServices
La mazwe alandelayo abonelela ngenkxaso yabantwana eServices. Ukuba awuhlali kwelinye lala mazwe, qhagamshelana ne-arhente yenkxaso yabantwana okanye iinkonzo zentlalo.
Ngaba iikati zam zidlala okanye ziyalwa
Ukulawula Inkxaso Yomntwana Wakho
Sebenzisa ii-eServices kwenza kube lula ukulawula imeko yakho yenkxaso yomntwana. Kwangokunjalo, inokunceda ekupheliseni ukungavisisani phakathi kwabazali, okunokunceda ukunciphisa uxinzelelo. Ukuba uyinxalenye yomyalelo wenkxaso yomntwana, ngena kwinkqubo yakho yenkxaso yomntwana wombuso ukuseka ii-eServices zetyala lakho.
Ubudlelwane Imibuzo Oobhaka Ibhodi Igama Inkcukacha Inja Ukufuya Nokukhulelwa Ibhlog
Iinwele Style Pictures
52 Amagama Omntwana Athetha Ithamsanqa, Ikamva, Okanye Ithamsanqa Lamakhwenkwe Namantombazana
Ukufumana phi uKhuphelo lwasimahla loMculo welizwe
Izizathu ezi-5 zokuba ufanele uthenge i-iPhone 7 (kunye no-5 akufuneki)
Iingcebiso kubafana abakwishumi elivisayo
Iintlobo zemithi ye-Oak
Umhlaza womfazi kunye ne-scorpio chemistry yamadoda
ukucoca njani ngaphakathi kwetaster
Ungasusa njani igrisi kwiikhabhathi zasekhitshini
indlela yokufumana amatikiti ekujoliswe kuwo ngeposi
Ndiyakukhumbula imibongo kuye umgama omde
Amakhandlela Imiboniso Yesilayidi
Ihambelana Astrological Signs